ukukhiqizwa kwesitshalo sembiza ye-paddy irayisi yokukhiqiza nokulungisa irayisi eliphuzi
1.Lesi sitshalo esiphelele sokukhiqiza ilayisi ngumshini omuhle wokucubungula okusanhlamvu kumafektri aphakathi nendawo namancane okulungisa irayisi
2.Ukuphakamisa irayisi ngokuzenzekelayo,izinga eliphakeme lamazwe omhlaba
3.Izinga eliphukile liphansi ekusetshenzisweni futhi isikhumba selayisi singasuswa ngokuhlanzeka
4.Ukwehlukanisa ilayisi elihlanzekile kumxube wezinhlamvu ezimangelengele, okulimaza okusanhlamvu nelayisi elinsundu
Imininingwane Yomkhiqizo wesitshalo se-15T / D selayisi lokusila
Uhlobo lwe-VTLN15 uhlobo oluphelele lokukhiqiza isigayo selayisi luyisethi ephelele yemishini yokucubungula irayisi,elihlanganiswe nge-paddy destomer, ukususwa kothuli, ukususwa kwamatshe, milling nelayisi. Isitshalo sokukhiqiza irayisi sePaddy irayisi elinomphumela omuhle wokususa itshe, ijubane lokuqhekeza igobolondo kanye nomphumela omuhle wokuhlukanisa okusanhlamvu. Lesi sitshalo sokulungisa irayisi ngomshini omncane wokudlidliza, Ukusebenza okulula nokukhishwa okusheshayo kwerayisi. Isitshalo sokulungisa irayisi se-paddy sinekristalu ecwebezelayo, isivinini sokudonsa isikrini esisheshayo nesibuko se-gravel sise surface.Residices nezinye izici.
Lesi sitshalo esiphelele sokwenza irayisi sifakwe emshinini wokupholisa,umshini wokugaya irayisi,umshini we-rice destoner njll,futhi inokukhishwa okukhulu, indawo encane yonyawo, isakhiwo esihlangene, Ukusebenza okulula njllpaddy irayisi yokuhlanza isitshalo ingahlangabezana nezidingo zamabhizinisi amancane wokukhiqiza irayisi,isitshalo sokukhiqiza irayisi esiphelele siyindawo efanelekile yomkhiqizo wanamuhla, umkhiqizo omkhulu wenkampani yemikhiqizo yelayisi.
Izici zesitshalo esiphelele sokukhiqiza ilayisi
1.Isitshalo sokukhiqiza ilayisi esizenzekelayo ngokugcwele, ukusetshenziswa kwamandla kancane.
2 Ukusebenza okulula, wonke umsebenzi ungasebenza umuntu oyedwa kuphela.
3.Isitshalo sokucubungula ilayisi lePaddy siqala ngomklamo omusha nobuchwepheshe bokuhambisa obusebenza kahle,ahlinzeka ukusebenza kokugaya okungahambekiyo ngobunzima obuncane.
4.Ifaniswe umshini wokucwebezelisa, abasebenzisi bangakwazi ukuvumelanisa nezimo zelayisi elimhlophe ngendlela elula, ukunciphisa izinga lokuphuka kwerayisi eliphelile bese kwanelisa izidingo ezihlukile zokupholisa irayisi.
5. Ilayisi elisetshenziswelwe lingagcinwa ngqo ukuze kuncishiswe ukuqina kwabasebenzi.
6.Singabakhiqizi bezitshalo zokulungisa imishini yethusi ephelele futhi abanokuhlangenwe nakho okucebile kokwakha isiza sokulungisa irayisi phesheya ngempumelelo, futhi sathola isithunzi esiphakeme kumakhasimende ethu ngekhwalithi enhle, intengo enhle kanye nokwesekelwa kwezobuchwepheshe.
Imishini yesitshalo sokulungisa irayisi
Lesi sitshalo esiphelele sokucubungula ilayisi esinomshini wokuphakela othomathikhi, isihlanza sokuhlanza, umshini wokuhlukanisa itshe, i-iron roller paddy husker, khumbula ukwahlukana, isihlukanisi sokudonsa ngokuhlukaniswa kwerayisi ne-brown irayisi, umshini wokugaya insimbi, umshini we-iron roller polishing, umshini wokugaya irayisi ophukile, iKhabhinethi yokulawula ugesi, lesi sitshalo esikhiqiza isigayo selayisi singaphinde sihlomise i-crusher crusher ekhethekile.
Ipharamitha yobuchwepheshe besitshalo esiphelele sokukhiqiza irayisi
Imodeli Yomkhiqizo: I-VTLN15
Ngamandla: 28.97 kw
Icubungula umthamo: 700-800Kg / h
Ubukhulu bebonke (ubude * ububanzi * ukuphakama): 5000*2000*2900mm
Izinto ezisebenzisekayo: irayisi ende yokwakheka ,round ijusi irayisi,amabele
ividiyo yesitshalo sokulungisa irayisi
Xhumana Nathi Ngesitshalo se-15T / D sokugaya irayisi